China Oral Irrigator ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Charmhome
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား DC 3.7V, 1400mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီ
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 85 * 72 * 218mm
အသားတင်အလေးချိန် ၂၄၅ ဂရမ်
၂။ ကြမ်းတမ်းသောဒီဇိုင်း - စက်မှ ၁၇ "ဝေးလွန်းသောဆူညံသံ 30Db ထက်နည်းသည်။
သွားများကိုသန့်ရှင်းစေရန် ၃.၃ Modes (Normal, Soft, Pulse) ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
4. Pulse Pulse: 1400-1800time / min
4-5 နာရီအားသွင်းပြီးနောက် 5.75 ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ မော်တာနှင့်ကိုက်ညီပြီးအားအင်ကိုချွေတာပါ။
၁။ သုံးစွဲရန်လွယ်ကူခြင်း - ရေထဲသို့ထည့်ရန်၊ ရေထည့်ရန်ရေတိုင်ကီ၏ ဦး ထုပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ nozzle ကိုထည့်ပါ၊ သင့်လျော်သော mode ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပါးစပ်ဆည်ရေပေးစက်ကိုဖွင့်ပါ။ ယခုတွင်သင်၏သွားများကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏သွားဖုံးအတွက်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု - ဤခံတွင်းရေသွင်းပေးသည့်ပါးလွှာသည့်သွားဖုံးသည်ကုသမှုခံထားရသောနေရာများမှပြား၏ ၉၉.၉% ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးသင်၏သွားဖုံးကျန်းမာရေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ထိရောက်စွာတိုးတက်စေသည်။ သွားဖုံးအင်္ကျီများကို ၀ တ်ဆင်ပြီးသွားများသွားဖုံးများ ၀ တ်ဆင်သည့်အခါရိုးရာဖြီးမရောက်နိုင်သည့်နေရာတွင်အလွယ်တကူသုတ်နိုင်သည်။
၃။ အဆင်ပြေလွယ်ကူ။ အိတ်ဆောင် - ဤရေ flosser ၏ Power and Modes control သည်ခွဲခြားထားတယ်၊ သင့် mode ကိုအရင်ရွေးချယ်ပြီး device ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ၂ မိနစ်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိသူသည်သင်သန့်ရှင်းရေးပြီးဆုံးပြီးနောက်အလုပ်လုပ်နေဆဲကိုရှောင်ရှားရန်။ အသုံးပြုသူများစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောအစားထိုးနင့်ဖုတ် ၂ ခုပါသည့်ရေ ၃၀၀ ML ရေတိုင်ကီ။
၄.၃ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများ - ပုံမှန်၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ သွေးခုန်နှုန်းသည်ဤသွားဘက်ဆိုင်ရာဆည်မြောင်း ၀ တ်စုံကိုလူအများအသုံးပြုရန်ပြုလုပ်ပေးပြီးသင့်တော်သော mode ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်သင်သည်သွားဖုံးများကိုရနိုင်သည်။
ဤလက်စွဲပါဝါပါးစပ်ရေစိုခံစက်သွားဘက်ဆိုင်ရာရေဂျက် Flosser သွားပေါင်းစပ်သွားတိုက်တံအစုသည်သတ္တုအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားပါးစပ်တွင်းကိရိယာများရှိသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောအပေါက်သည်ရိုးရာချည်မျှင်များမစီးနိုင်သည့်နေရာများသို့ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
စူပါအဆင်ပြေသော USB plug, ကို USB block သို့မဟုတ် computer တွင်အားသွင်းရန်လွယ်ကူသည်။ (Adapter ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ )
7. IPX7 ရေစိုခံ
ဤလက်စွဲစာအုပ်ပါဝါပါးစပ်ဆည်ရေသောက်ဆေးသွားဘက်ဆိုင်ရာရေဂျက်လေယာဉ်ပျံသွားအံသွားများသွားတိုက်တံ Set သည် IPX7 ရေစိုခံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရေအောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်း၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်စွာမခံပါနှင့်၊ သန့်ရှင်းရေးပြီးသွားပြီးနောက်ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
တစ်မိနစ်လျှင် 1400-1800 ပဲမျိုးစုံနှင့်အတူ 30-100psi ကနေရေဖိအား။ သွားတွေကိုထိထိရောက်ရောက်သန့်ရှင်းပေးပါ။
၉. ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်မှု
Li-ion အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများလည်ပတ်ပြီးပါးစပ်ရေသွင်းမှုကိုအဆင်ပြေသော USB plug သို့မဟုတ် adapter power plug ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ မြို့ပတ်ခရီးသွားသွားတိုက်တံဖြစ်ရပ်မှန် CHC001
နောက်တစ်ခု: 2020 အသစ်ရောက်ရှိလာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sonic Electric သွားတိုက်တံ EA312